ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AMAZWE Abadlali bebhola ekhatywayo abangamaNgesi UHarry Winks Ibali leNkwenkwe yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwayo ngegama lesidlaliso "Little Iniesta". I-Harry Winks Story Story yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yentsapho, ibali lobomi phambi kobuqili, ukuphakama kwindalo, udlelwane nobomi bomntu.
Ewe, wonke umntu uyazi ngeembonakalo zakhe ezintle, isakhelo esincinane kunye nesitayela somdlalo. Nangona kunjalo, bambalwa abambalwa ngeHarry Winks 'Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
UHarry Winks Ibali leNkwenkwe yabantwana Plus Untold Biography Facts-Ubomi Bokuqala Nentsapho
Ukuqala, igama lakhe elipheleleyo nguHarry Billy Winks. UHarry Winks njengoko uyazi ukuba wazalwa ngosuku lwe-2nd kaFebhuwari 1996 kunina, uAnita Winks noyise, uGary Winks eHemel Hempstead, eUnited Kingdom.
UHarry wazalwa yintsapho enothando yebhola. Uyise wakhe uGary wayengumdlali webhola wezemidlalo owayengumqeqeshi webhola odlala iHemel noBerkhamsted. Intsapho yaseWinks yayisisigxina sobomi be-Spurs ukususela ngo-1984 emva kokuphumelela kwekomiti ye-UEFA ye-UEFA.
Ukuthetha kwimbali yentsapho okanye imvelaphi, uHarry Winks uvela kwintsapho yaseSpeyin ephuma kumama nonogogo nomkhulu. Noko ke uyaziqhenya ngokuba ngumBritish ngoyise. UHarry wakhula kunye nodadewabo omncinane ogama lakhe linguMilli okhusela kakhulu.
Ingakhathaliseki ukuba ekhaya okanye udibene nabantakwabo, uHarry eboniswe apha ngezantsi uya kuhlala ekhangela udade wakhe omnandi.
Namhlanje, ukuba intle kwaye nekratshi kakhulu ukuba milli ukubona umntakwabo enkulu, umntu abasenyongweni owayesakuba neqabane kulwaphulo abafumana footballing impumelelo kangaka.
Okwangoku njengokuba ngexesha lokubhala, akukho mntu kwihlabathi elinomtshato oqinileyo olwabelwana phakathi kukaHarry, uMilli kunye nomama wabo u-Anita.
UHarry Winks Ibali leNkwenkwe yabantwana Plus Untold Biography Facts- Career Buildup
Ethetha ngokuba ngumdlali we-Spurs, uyise kaHarry uGary wambi wathi:
Ngokuqinisekileyo uHarry ungumdlali we-Spurs, owanyanzeliswa nguye!
UHarry nje njengomama wakhe nobawo bebeye Tottenham Hotspur nomdlali ngaphambi kokuba aqale ukudlala ibhola. UHarry waya kumdlalo wokuqala wokukhumbuleka kwi-White Hart Lane xa wayeneminyaka emithandathu ubudala. Ukubona okuthandayo Michael Carrick, URobbie Keane kunye UTeddy Sheringham wamkhuthaza ukuba aqalise ukukhahlela nantoni na ekhangeleka ngathi yibhola ekhatywayo.
Ethetha ngethuba lomntwana webhola njengomntwana, umama kaHarry Wink ka-Anita watsho kwiGazethi:
"Njengomntwana omncinci uHarry wayeza kudlala nge-sock-up sock. Uya kuba yiyo yonke indawo. Emva koko wahamba ebhola ye-tennis. Uya kuhlala ekhaba yonke indlu, ndixhaphaze! "
Ukuba akukhatywanga ibhola yebhola okanye ngaphakathi kwintsapho yakhe, uHarry wayeza kubonakala ebuza kufuphi UDavid Beckham kwaye Michael Owen.
Nangona uHarry wayebathanda ngeSpurs, wagqiba ekubeni azibophe ngeenguNgesi kunye neempuphu. Ukujonga kwiifoto zakhe ezingasentla, uya kuzibona zizinto ezithandayo zejezi.
Njengokuba ngexesha lokubhalwa, iJapan yesizwe iJerith ifanelana nomhle kakhulu.
UHarry Winks Ibali leNkwenkwe yabantwana Plus Untold Biography Facts- Qala iNkonzo yoQala
olunokubakho Harry kaThixo yokuqala eyabonwa eneminyaka 5 xa abazali bakhe ababhaliswe naye irosta Ross & Andy lebhola ekhatywayo Camps. Waqhubeka edlala no-Echoes FC eHemel Hempstead apho iitalente zakhe zendalo zaziwa kakuhle.
UHarry wayaziwa njengomntu onamandla kwaye nangona wayezimeleyo, wayeya kufikelela malunga nomdlalo onamandla. Ekuqaleni, uHarry wayenemfundo yakhe yokuqala yebhola kunye neCavendish School ephakamileyo apho waphumelela khona kwi-11.
UHarry Winks Ibali leNkwenkwe yabantwana Plus Untold Biography Facts- Ubomi bokuqala kwi-Spurs
Ngenxa amandla akhe bayibambe ibhola njengento kid, uHarry kwenziwa isincomo yi umkhapheli yakhe Ross & Andy lebhola ekhatywayo Camps ukuya iimvavanyo ubedlala Hotspurs. Wadlula waza wabhalisa kwiqela. Kwaye nasezikolweni zaseTottenham, ezininzi iiklabhu zisaqhubeka zithandana njengomntwana.
Abazali bakaHarry u-Anita noGary babenomdla wokunyanzelisa imihlatshelo eninzi eyenziwa nguHarry ngethuba lokuqala kwakhe kwiTottenham. Okokuqala, njengomntwana osemncinci, ama-Winks ahlupheke ukulimala kokukhula kunye neengxaki zangemva. Nangona kunjalo, umphathi wezemfundo uMcDermott wayenokholo kwinkwenkwe enjengoko wenzayo nabasakhulayo, njengale Kane kwaye Andros Townsend. nokuba Teddy Sheringham wathatha umdla omkhulu kuma-Winks amancinci kunye Scott Parker yavela njengomcebisi.
UHarry Winks Ibali leNkwenkwe yabantwana Plus Untold Biography Facts- Isigqibo Esikhulu kunye Nokunyuka Kwegama
Ukuze anikezele ubomi bakhe kumaphupha akhe, uHarry wanquma ukuphuma ekhaya kwikhaya elidala kwi16 ukuba ahlale kufuphi ne-Spurs training ground. Isigqibo sasingekho lula kwiintsapho zeWinks. Ngokomama wakhe uAnita;
UHarry kwafuneka atshintshe, ngengqondo. Wayenomdla kakhulu, kwaye ukuphuma kuloo minyaka kwakunzima kakhulu. Bonke abathathu-mna, uGary, kunye neMilli bema bekhala njengoko evala umnyango wangaphambili phambi kwethu.
Abazali bakaHarry babeza kumbona ngokuhlwa nje ngeveki. NgokukaHarry, ukusukela kwikhaya lentsapho ukuhlala nabantu awazange adibana nayo mhlawumbi yinto enzima kunayo yonke eyayiyenzile ebomini bakhe bonke. UHarry waqhubeka ehlala eMzantsigate, kwindawo engasemntla-ntshona yaseLondon. Wahlala nesibini esitshatileyo esibizwa ngokuba nguLesley kunye noMat ogama lakhe lalisondele kwi-Spurs yoqeqesho lolutsha. Ngenhlanhla, uMat owayengumqeqeshi wokuqhuba ufundisa uHarry indlela yokuqhuba ngayo.
UHarry Winks Ibali leNkwenkwe yabantwana Plus Untold Biography Facts- Ukunyuka Kwigama
Ukuzimisela kukaHarry ukuba abe yingcali akuzange kwenzeke njengento emangalisayo. Ngo-27 Julayi 2014, watyikitya isivumelwano sakhe sokuqala kunye neTottenham emva kokumangalisa Mauricio Pochettino owalindela ngokuzenzekelayo iividiyo ezenzayo.
Pochettino wabona uHarry njengomdlali ofanayo nabazalwana bakhe baseSpain Xavi kwaye Iniesta. Kwakhona wayejonge kuye ehluke ngokupheleleyo kubadlali bakhe abaphakathi; Victor Wanyama, Eric Dier, Mousa Dembélé kwaye Moussa Sissoko. Umkhosi wokugqibela wenjongo yeHarry wabonisa indlela yena kunye Mauricio Pochettino beye bahlakulela intsebenziswano eqinile ukususela ekuhlanganisweni kwabo kokuqala.
Ngokukrakra, uHarry wabizelwa eNgilani naphezu kokwenza ezine kuphela eziqala kwiligi likaSpurs. Gareth Southgate wamthatha wambulela kwingxelo yakhe yokudlula.
UHarry Winks Ibali leNkwenkwe yabantwana Plus Untold Biography Facts- Ulwalamano lobomi
Ubusazi?… Kuzo zonke iifilimu ze-movie, le ntombazana yayiza kuwa ngamaxesha amaninzi kwibhola lebhola. Ngexesha elithile kwintombazana yobomi bendoda, ephantsi, kuhlale kunqwenela ukuqalisa umdlali weenkwenkwezi. Ngelishwa, amaFilimu awakubonisi ukuhlaselwa komdlali webhola. Esi sizathu esinye senza ukuba uHarry abe engatshatanga kwiminyaka yokuqala yemisebenzi yakhe.
Ibali likaHarry lokuqala lomtshato lafika ngexesha le-22 (ngoJulayi 2018) xa ebonwa ngendodakazi yaseBrithani, uRosie Williams oneminyaka eyi-4 yakhe ephezulu. Le bhangqa yayibonakale ibonakale ihamba kwihotele ye-5-ehhotela laseLondon, i-Shangri-La.
Kulo mfanekiso, uHarry wabonakala engumntu omele uRosie njengoko wayemvulele umnyango. Le yithuba elithile uRosie waxoshwa ngaphandle kweBritish Love Island. Ukuphuma kwi-blazer ephathekayo ephathekayo, umfazi waseWalde kwafuneka agqoke isibonakaliso somthetho kumntu awamncomayo. Kuphela ixesha eliya kuxelela ukuba uHarry uyamthatha njengentombi okanye umfazi.
UHarry Winks Ibali leNkwenkwe yabantwana Plus Untold Biography Facts- Ubomi bomntu
UHarry wazalwa enamahloni kwaye ethule, kodwa ngakolunye uhlangothi, unokuba ngumntu onamandla kwaye unamandla. Njengoko kubonwe kwimihla yobutsha bakhe, ngumntu onokuzivumelanisa ngokukhawuleza utshintsho lwendalo okanye nayiphi na amandla amatsha ajikelezileyo.
Ubusazi?… Ngokungafani nabanye abadlali bebhola, uHarry Winks akafumani ngakumbi kunye nabalandeli. Oku kungenxa yokuba wayekhokhelwa ngokubi ngenxa yokwenza okulungileyo. Ngoku makhe ndikuxelele oko kwenzeka ngokwenene!
UHarry wayebonwe kwiqela eliseWatford ngumqhubi, owayenxinzelele umnqwenqa ukuba athathe isithombe kunye nama-Winks engayazi iinjongo eziphambili. Ngothusa, Lowo mfana ogama linguNikhil Shah ubeke isithombe kwiphepha lakhe loononophelo loluntu ngokubonisa ii-Winks ekwenzeni i-clubbing nangona unobangela wokulimala.
Umqhubi wahamba waya kuzama ukudibana naye Ilanga Ukuxoxa ukuthengiswa kwesithombe esenzeka ngokugqithiseleyo. Ngezantsi i-snapshot yento elula ekhangelekileyo kodwa engendawo yobubi uNikhil Shah wabhala emva kokulayisha isithombe kwi-akhawunti yakhe ye-Instagram.
Oku kuchaza isizathu sokuba i-Winks ingabi nxu lumene nabalandeli ngokukodwa kwiindawo ezingafanelekanga. Nangona yonke inzame yokufumana udumo oluncinci, u-Shah wonakaliswa ngabalandeli ngokuzama ukuphuma kwiWinks.
I-CoD Fan: UHarry uzijonga njengomlutha kwi-Call of Duty game.
UHarry naphezu kweeshedyuli zakhe ezithintekayo zebhola yamatyala ufumana ixesha lokuya kwi-Call of Duty events.
UHarry akabi njengomlutha Hector Bellerin ngubani owake wadlala i-CoD kwiiyure ze-30 ngeveki.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda iHarry Winks Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Facts. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.